Natural Astaxanthin (472-61-7) ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
သဘာဝ Astaxanthin (472-61-7) သည်သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသော carotenoid ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်အဏ္ဏ ၀ ါတွင် ......
သဘာဝ Astaxanthin (472-61-7) ဗီဒီယို
သဘာဝ Astaxanthin (472-61-7) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမည် သဘာဝ Astaxanthin
ဓာတုအမည် Ovoester; Astaxanthine; (3S, 3'S) -Astaxanthin; 3,3′-dihydroxy-β, β-carotene-4,4′-dione
CAS အရေအတွက် 472-61-7
Monoisotopic Mass 596.38656 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 215-216 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 568.55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်)
ပျော်ဝင် DMSO: soluble1mg / mL (အပူ)
လြှောကျလှာ astacin ဟုလည်းလူသိများသည့်သဘာဝ Astaxanthin သည်တန်ဖိုးရှိသောကျန်းမာရေးပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးခုခံအားစနစ်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ရေး၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ မျက်စိနှင့် ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်၊ လက်ရှိတွင်လူသား၏ကျန်းမာရေးနှင့်အစားအစာအတွက်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ငါးမွေးမြူရေး (လက်ရှိအဓိကဆော်လမွန်၊ ရောက်ရေချိုငါးနှင့်ဆော်လမွန်)၊ ကြက်ဘဲအစာထပ်ထည့်ခြင်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းများ။
၁၈ ရာစုတွင် Haematoccus pluvialis ရေညှိများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိသူထုတ်လုပ်သော Astaxanthin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များက၎င်း၏ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုခဲ့ပြီး၊ antiaxidant Astaxanthin သည်မည်မျှအစွမ်းထက်သည်ကိုလူများနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလေ့လာမှုအသစ် ၁၀၀ လောက်လုပ်ပြီးပြီ၊ အခု ၁၀၀၀ လောက်ထုတ်ဝေပြီးပြီ။
Astaxanthin ကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခက်ခဲသောအခါရေညှိများမှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အစားအစာမလုံလောက်ခြင်း၊ ရေမရှိခြင်း၊ ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်နှင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအရာများပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်ရေညှိဆဲလ်များသည် Astaxanthin အနီရောင်ခြယ်ပစ္စည်းကိုစုဆောင်းမိလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်အကာအကွယ်ပေးရန်“ အင်အားသုံးနယ်ပယ်” တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ထဲမှာ Astaxanthin အမျိုးအစားများ
Astaxanthin အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ရိုင်းငါးနှင့်ရေညှိများတွင်တွေ့ရသောသဘာဝပုံစံနှင့်ရေနံဓာတုပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ထားသောဒြပ်ပုံစံ။ သဘာဝ Astaxanthin သည်ဒြပ်ထုထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ca. သာရှိသည်။ သဘာဝ Astaxanthin ၏ antioxidant စွမ်းရည်၏သုံးပုံတစ်ပုံ။ သန့်ရှင်းသော Natura တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေချိုရေညှိ Haematococcus Pluvialis ကိုအသုံးပြုသည်။ Astaxanthin အပြင်၊ ရေညှိတွင် Omega-3 fatty acids များစွာပါ ၀ င်သည်။ ရေညှိသည်အိုက်စလန်တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအပင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးအိုက်စလန်၏သန့်ရှင်းသောလေ၊ ရေနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်။ သဘာဝ Astaxanthin အမှုန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်။
သဘာဝ Astaxanthin ဆိုတာဘာလဲ။
သဘာဝ Astaxanthin (၄၇၂-၆၁-၇) သည်သဘာဝတွင်တွေ့ရှိရသောသဘာဝ carotenoid ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ပင်လယ်ရေတွင်သက်ရှိများဖြစ်သည့် microalgae, salmon, trout, krill, ပုစွန်၊ crayfish နှင့် crustaceans စသည်ဖြင့်အဏ္ဏဝါသက်ရှိများတွင်တွေ့ရသည်။ အနီရောင်နှင့်ဆော်လမွန်, ကဏန်း, ကျောက်ပုစွန်နှင့်ပုစွန်အသားကိုပန်းရောင်ပြောင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ crustaceans များတွင်၎င်းကိုပရိုတိန်းများကဝိုင်းထားပြီးအပူဖြင့်ထုတ်လွှတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ချက်ပြုတ်သောအခါပုစွန်နှင့်ကျောက်ပုစွန်သည်အနီရောင်ဖြစ်လာသည်။
အနီရောင် - ပန်းရောင်ခြယ်ပစ္စည်းအနေဖြင့်သဘာဝ astaxanthin ကိုငှက်များ၊ ငုံးများ၊ ဖလင်မင်နှင့်တောငန်းများအပြင်ပျားများမှစုဆောင်းသောခံနိုင်ရည်ရှိသော propolis များတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အစိမ်းရောင် microalga Haematococcus pluvialis ကို astaxanthin ၏အချမ်းသာဆုံးအရင်းအမြစ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ အခြား microalgae များဖြစ်သော Chlorella zofingiensis, Chlorococcum spp ။ နှင့် Botryococcus braunii တို့တွင် astaxanthin များပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်အနီရောင်အရောင်ပါသောဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့၌လည်း၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။
လူသားများအတွက်သဘာဝ astaxanthin သည် Haematococcus pluvialis-derivated antioxidant ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့်ဖြည့်စွက်ရန် lipid-solubable antiossidant carotenoid ဖြစ်သည်။ Astaxanthin သည်လေ့ကျင့်ခန်းဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်မှုညွှန်းကိန်းများကိုအလားအလာကောင်းစေသောကြောင့် antioxidant စွမ်းရည်ရှိသောကြောင့်လူ၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။
သဘာဝ Astaxanthin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Natural Astaxanthin သည်အစွမ်းထက်သောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အခမဲ့အစွန်းရောက်ပျက်စီးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက် Antioxidants သည်အရေးကြီးသောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခမဲ့အစွန်းရောက်များမှာဆဲလ်များ၌ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၏ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်စုပြုံ။ မရသောအီလက်ထရွန်များဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကတစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ကိုဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့သုံးတယ်။
ဆဲလ်များ၌အခမဲ့အစွန်းရောက်များဖွဲ့စည်းပြီးသည်နှင့်သူတို့၏အီလက်ထရွန်တစ်ခုတည်းကသူတို့ကိုအလွန်တည်ငြိမ်စေသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဓာတ်ပြုပြီးဒုတိယအီလက်ထရွန်ကိုဖမ်းယူသည်။ သူတို့မှာဒုတိယအီလက်ထရွန်တွေရှိရင်ပြန်တည်ငြိမ်လာတယ်။
ပြီးတော့သူတို့ဟာအနီးဆုံးတည်ငြိမ်ဆုံးမော်လီကျူးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအီလက်ထရွန်ကိုခိုးယူလေ့ရှိတယ်။ ထို့ကြောင့်ပျက်စီးနေသောအီလက်ထရွန်နှင့်ပျက်စီးနေသောမော်လီကျူးသည်အခြားလွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုစတင်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို oxidative stress ဟုခေါ်သည်။
၎င်းသည်သင်၏ခွေးခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များ၊ ပရိုတင်းများနှင့် DNA ကိုပျက်စီးစေသည်။ ဒါ့ကြောင့်အခမဲ့အစွန်းရောက်မှုတွေဟာကင်ဆာအပါအဝင်စောစောစီးစီးအိုမင်းခြင်းကဲ့သို့သောအဖြစ်များသောရောဂါများနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
သဘာဝ Astaxanthin အကျိုးကျေးဇူးများ
သဘာဝ Astaxanthin သည်လူ့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
❶ Astaxanthin သည်နာကျင်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသည်
Natural Astaxanthin သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဓာတုပစ္စည်းများအားပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နာတာရှည်ရောဂါများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသောရောင်ရမ်းဒြပ်ပေါင်းများကိုလျော့နည်းစေခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်အစွမ်းထက်သောရောဂါဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဆစ်အဆစ် (RA) နှင့် carpal tunnel syndrome စသည့်ရောဂါများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သဘာဝ Astaxanthin သည် COX2လမ်းကြောင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိရုံသာမက၎င်းသည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်၊ interleukin 1B၊ prostaglandin E2, C Reactive Protein (CRP) နှင့် TNF-alpha (အကျိတ် necrosis factor alpha) ၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်ကိုဖိနှိပ်သည်။ ရှစ်ပတ်အတွင်း CRA ကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
❶ Natural Astaxanthin သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီပါ
Natural Astaxanthin သည်လေ့ကျင့်ခန်းမှအလွန်ကောင်းမွန်သောအားကစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအားကစားသမားများအားအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ကြွက်သားများပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ခွန်အားတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စွမ်းအင်တိုးတက်ခြင်းတို့အတွက်သန့်စင်သောသဘာဝ astaxanthin ကိုပြသထားသည်။
❶ Natural Astaxanthin သည်မျက်လုံးကျန်းမာရေးကိုထောက်ပံ့သည်
Natural Astaxanthin သည်အတားအဆီးတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသင်၏လှာသို့ရောက်ရန်ထူးခြားသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအရ Astaxanthin သည်ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာ retinopathy၊ macular deeneration၊ မျက်စိ strain နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများကိုအသေးစိတ်ပြသရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်သဘာဝ Astaxanthin သည်၎င်းသည် AMD ရှိသူများအတွင်းရှိလှာ၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောပျက်စီးမှုကိုတိုးတက်စေသော်လည်း၎င်းသည်မြင်လွှာ၏အပြင်ပိုင်းဒေသများတွင်ပျက်စီးမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။
❶ Natural Astaxanthin သည်ဆဲလ်များကိုသန့်ရှင်းစေသည်
Natural Astaxanthin သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းထဲသို့စစ်ထုတ်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောမော်လီကျူး lipophilic နှင့် hydrophilic ဂုဏ်သတ္တိများသည် astaxanthin မော်လီကျူး၏အဆုံးတစ်ခုသည်ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏သက်တမ်းတစ်လျှောက်နှင့်ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသောအစိတ်အပိုင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်အတူဆဲလ်တစ်ခုလုံးကိုသက်ရောက်စေသည်။
❶ Natural Astaxanthin သည်အရေပြားကိုကာကွယ်နိုင်သည်
Astaxanthin သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အကြီးဆုံးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုကာကွယ်ရန်ပြသပြီး၎င်းသည်နေမှခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၉ ရက်ပတ်လုံး Astaxanthin ကိုပါးစပ်ဖြင့်သောက်ခြင်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟုခေါ်သောနေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရေပြားအစိုဓာတ်ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အသားအရေအစိုဓာတ်ထိန်းညှိခြင်း၊ ချောမွေ့ခြင်း၊
ဘေးဖယ်, သဘာဝ Astaxanthin ကိုလည်းအထီးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, သွေးဆုံးလက္ခဏာတွေကုသနှင့် triglycerides ဟုခေါ်တွင်သောအသွေးအဆီလျှော့ချခြင်းနှင့်မြင့်မားသောလက်စထရောနှင့်အတူလူများတွင် high-density ကို lipoprotein (HDL သို့မဟုတ် "ကောင်းသော") ကိုလက်စထရောတိုးမြှင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သဘာဝ astaxanthin သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုများစွာအကျိုးပြုနိုင်သည့်အချက်ကို အခြေခံ၍ သဘာဝ astaxanthin အမှုန့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ထုတ်ကုန်များစွာသို့မဟုတ် astaxanthin အမှုန့်အပေါ်အခြေခံပြီးသဘာဝ astaxanthin ဖြည့်စွက်စျေးကွက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
သဘာဝ Astaxanthin အသုံးပြုမှု (472-61-7)
သဘာဝကျကျ Astaxanthin သည်ရောဂါများကိုကုသရာတွင်အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္hasတွင်ရှိသည်။ ပထမ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရောဓာတ်မြင့်မားခြင်း၊ အသည်းရောဂါများ၊ ။ ဒုတိယအချက်မှာ၎င်းသည်နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုတိုးပွားစေသောအခြေအနေများဖြစ်သည့်ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။ တတိယအချက်မှာ၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ကြွက်သားနာကျင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းအတွက်လည်းအသုံးပြုသည် ဒါ့အပြင် astaxanthin ကိုအိပ်စက်ခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် carpal tunnel syndrome, dyspepsia, အမျိုးသားမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း၊ သွေးဆုံးရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများအတွက်လည်းခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် astaxanthin သည်အခြားနယ်ပယ်များတွင်လည်း၎င်း၏အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ အရေပြားတွင်ကဲ့သို့ astaxanthin သည်နေလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ အရေးအကြောင်းများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အခြားအလှကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အရေပြားကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။ အစားအစာများတွင်၎င်းကိုဆော်လမွန်၊ ကဏန်း၊ ပုစွန်၊ ကြက်နှင့်ဥထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အစာဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်အစားအစာအရောင်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်ရှိစဉ်ကြက်ဥထုတ်လုပ်သည့်ကြက်များအတွက်အက်တာစတန်ကိုအစားအစာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင် Natural astaxanthin အမှုန့်များကိုအရည်အသွေးမြင့်မားစွာပေးမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကို Astaxanthin ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့်အရေပြားထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် astaxanthin အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာလိုလျှင်သို့မဟုတ် astaxanthin အမှုန့်ကိုလက္ကားလုပ်လိုလျှင် PHCOKER သည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
Ambati, Ranga Rao; Phang, Siew-Moi; Ravi, Sarada; Aswathanarayana, Ravishankar Gokare (2014-01-07) “ Astaxanthin: အရင်းအမြစ်များ၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ယင်း၏စီးပွားဖြစ်အသုံးချခြင်း - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း” ။ အဏ္ဏဝါမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 12 (1): 128-152 ။ Doi: 10.3390 / md12010128 ။ PMC 3917265. PMID 24402174 ။
Choi, Seyoung; Koo, Sangho (2005) ။ "Keto-carotenoids ၏ Canthaxanthin, Astaxanthin နှင့် Astacene ၏ထိရောက်သော Syntheses" ။ အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၏ဂျာနယ်။ 70 (8): 3328-31 ။ Doi: 10.1021 / jo050101l ။ PMID 15823009
အစားအစာများ၊ ဆေးဝါးများ၊ အလှကုန်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အသုံးပြုရန်အရောင်အနှစ်ချုပ်များအကျဉ်းချုပ်။ Fda.gov ။ 2019-01-16 အပေါ်ရယူရန်။
Lee SJ၊ Bai SK၊ Lee KS၊ Namkoong S၊ Na HJ၊ Ha KS, Han JA, Yim SV, Chang K, Kwon YG, Lee SK, Kim YM ။ Astaxanthin သည်ငါ (kappa) B kinase-dependant NF-kappaB activation ကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်ရမ်းဗီဇဖော်ပြမှုကိုတားဆီးပေးသည်။ Mol ဆဲလ်။ 2003 သြဂုတ် 31; 16 (1): 97-105 ။ PubMed PMID: 14503852 ။
ရုဖာ, ကိုရီနာအီး။ ; Moeseneder, Jutta; Briviba, Karlis; Rechkemmer, Gerhard; Bub, Achim (2008) ။ ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင်ရိုင်း (Oncorhynchus spp ။ ) နှင့်ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း (Salmo salar) မှ astaxanthin stereoisomers များ၏ဇီဝရရှိနိုင်မှု - ကျပန်း၊ မျက်မမြင်လေ့လာမှု "။ ဗြိတိသျှအာဟာရဂျာနယ်။ 99 (5): 1048-54 ။ Doi: 10.1017 / s0007114507845521 ။ ISSN 0007-1145 ။ PMID 17967218
Yook JS et al ။ "Astaxanthin ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ကြွက်များတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ hippocampal neurogenesis နှင့် Spatial memory ကိုပိုကောင်းစေတယ်" Molecular Nutrition & Food Research, vol ။ 60 မရှိ။3(မတ်လ 2016): 589-599 ။